Lampard oo ammaanay qaab ciyaareedka Kai Havertz, kaddib saddexleydii uu xalay dhaliyay – Gool FM
(London) 24 Sebt 2020. Tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea ee Frank Lampard ayaa muujiyay sida uu ula dhacsan yahay waxqabadka Kai Havertz, kaddib markii uu dhaliyay 3 gool kulankii xalay ee koobka Carabao Cup oo ay 6-0 kaga badiyeen naadiga Barnsley.
Frank Lampard ayaa sheegay inay tahay mid ka mid ah habeenadii cajiibka ahaa ee laga filayay ciyaaryahanka xulka qaranka Jarmalka ee Kai Havertz.
Kai Havertz ayaa ku dhibtooday labadiisii ​​kulan ee ugu horreeyay horyaalka Premier League ee uu wajahay kooxaha Brighton & Hove Albion iyo Liverpool, laakiin xalay ayuu muujiyay sababta ay Chelsea u bixisay 71 million pounds, si ay ugala soo wareegto Bayer Leverkusen.
Frank Lampard ayaa ciyaarta kaddib u sheegay warbaahinta:
“Labadii kulan ee ugu dambeysay waxaan sheegay in Kai Havertz uusan sameynin tababar bilawga xili cayaareedkan, wuxuuna ku biiray koox cusub, isla markaana uu u baahan yahay maalmo dhowr ah”.
“Waxaan ku qasbanaanay inaan ka qeyb galino kulankan, sababa la xiriira dhaawacyada ay qabto kooxda, wuxuuna habeenku ahaa fursad fiican iyo ciyaar kale oo lagu arkay sida aan u dhaqaaqi karno kubad la’aanta”.
“Waxay u ahayd habeen weyn Kai Havertz, marka loo eego wada shaqeynta kala dhexeysay Tammy Abraham, sida uu u fiicnaaday intii ay ciyaartu socotey, kalsoonida uu helay iyo saddexda gool uu dhaliyay, waxay aheyd habeen u horseeday inuu fiicnaado habeenada kale”.
Intaas kaddib Frank Lampard ayaa xaqiijiyay in goolhayaha reer Senegal Edouard Mendy uu maray tijaabada caafimaad ka hor inta uusan dhameystirin heshiiska uu kaga mid noqanayo kooxda reer London ee Chelsea.
Si kastaba ha noqotee, Chelsea ayaa sabtida kula ciyaari doonta kooxda West Bromwich Albion, ciyaar qeyb ka ah kulamada Isbuuca saddexaad ee horyaalka Premier League.